အိမ်မှာနေရင်း MyanLearn နဲ့အတူ English စကားပြောကျင့်မယ် ၊ Certificate တွေ ရယူကြမယ်။ | MyanLearn Article
#1 Myanmar's Online Learning Platform
အိမ်မှာနေရင်း MyanLearn နဲ့အတူ English စကားပြောကျင့်မယ် ၊ Certificate တွေ ရယူကြမယ်။
“ အင်္ဂလိပ်လို ပြောလိုက်ရင် နည်းနည်းတော့ နားလည်တယ် ဒါပေမယ့် ပြန်မပြောတတ်ဖြစ်နေတာ” ဆိုတာမျိုး ကြုံဖူးကြလား ?
ဒီလို အခြေအနေမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ အများစု ဖြစ်ဖူးကြုံဖူးမှာပါ။
MyanLearn ရဲ့ SPEAK ENGLISH Online Course အကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ အခုလင့်ခ်မှာ ( http://bit.ly/2VT41Nk ) မှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပေးပါနော်။
ဒါ့အပြင် SPEAK ENGLISH Online Course ရဲ့
▫️ FB Page Messenger (m.me/MyanLearnOnline)
▫️ Hotline နံပါတ် ၀၉-၆၆၂၂၂၆၀၆၀ မှာလည်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။
MyanLearn App ကို Download ဆွဲရန်
ဒီလို အခြေအနေမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ အများစု ဖြစ်ဖူးကြုံဖူးမှာပါ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ၊ အပေါင်းအသင်းကြားမှာ အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆို ဆက်ဆံရတဲ့အခါ နားလည်သယောင်ယောင် ရှိနေပေမယ့် ပြန်မပြောတတ်တာမျိုး ပြောချင်ပေမယ့် ဘယ်လို စကားလုံးကို သုံးရမလဲ မသိတာမျိုးပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်လဲ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောရဲတာမျိုးပေါ့။
ဒီအတွက် MyanLearn ရဲ့ SPEAK ENGLISH Online Course ရှိနေပါပြီ။
MyanLearn ရဲ့ SPEAK ENGLISH Online Course နဲ့ဆို
• အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို အဓိကထားးလေ့လာချင်သူတိုင်းအတွက် နေ့စဉ်သုံးစကားပြော တွေကစလို့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း Professional ကျကျ ပြောဆို ဆက်ဆံနည်းတွေအထိပါ လေ့လာနိုင်မယ်။
• အဓိက ထူးခြားချက်က Bot နဲ့သာ အပြန်အလှန်စိတ်ကြိုက် စကားပြော လေ့ကျင်နိုင်မှာမို့ အဖော်လဲရှိ ယုံကြည်ချက်လဲရှိရှိနံဲ့ လေ့ကျင့်နိုင်မှာနော်။
• တစ်ယောက်တည်း သင်ယူရတာ ပျင်းချိန်မရလောက်အောင် ပုံမှန် စာသင်ပေးနေတာချည်းမဟုတ်ဘဲ ဂိမ်းပုံစံ သင်ခန်းစာတွေလည်း ပါဝင်တော့ ဝေါဟာရ တွေ အသုံးပြုပုံတွေကို ဖတ်ရမှတ်ရကျက်ရ လွယ်ကူစေမှာပါ။
• အိမ်မှာနေရင်း ၊ ကော်ဖီဆိုင် ထိုင်ရင်း အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်း App လေး ကောက်ဖွင့်လိုက်ရုံမို့ ကိုယ် သင်ချင်တဲ့ အချိန်က ကိုယ့်သင်တန်းချိန်ပါပဲ။
• အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ နားမလည်မှာ စိုးတယ်ဆိုသူတွေအတွက် မြန်မာဘာသာပြန်တွေနဲ့ တပါတည်း တွဲလေ့ကျင့်နိုင်မှာမို့ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
• ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလား အစမ်းသင်ယူကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း MyanLearn App ကို download လုပ်ပြီး အခမဲ့အစမ်း သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
• ဒါ့အပြင် လေ့လာမှု ပြီးမြောက်သွားတဲ့ အခါမှာလည်း Certificate ပေးအပ်သွားဆိုတော့ ခုပဲ အိမ်ထဲနေရင်း အွန်လိုင်းသုံးရင်း ကုန်ဆုံးသွားမယ့် နာရီ မိနစ်တွေကို MyanLearn ရဲ့ SPEAK ENGLISH Online Course မှာ ဝင်ရောက် လေ့လာကြည့်ပြီး အကျိုးရှိစွာ အသုံးလိုက်ပါ။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများ
MyanLearn ရဲ့ ခရစ္စမတ်လက်ဆောင် တွေရပြီးကြပြီးလား ?
Speak English Xmas Short Course (သင်တန်းတို) "အခမဲ့" တက်ရောက်ခွင့်
MyanLearn ရဲ့ ရက် ၉၀ - ၉၀၀၀ ကျပ် နဲ့ ပိုဖတ် ပိုတန် စာအုပ်အနှစ်ချုပ် Plan
နိုင်ငံတကာရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာအုပ်အမျိုးအစားအစုံအလင်ရဲ့ မြန်မာဘာသာပြန် စာအုပ်အနှစ်ချုပ်တွေကို စိတ်တိုင်းကျ ဖတ်ရှု နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
စာပေချစ်သူတွေအတွက် MMBusTicket ရဲ့ စာပေ ဒါန လက်ဆောင်
MyanLearn မှ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး "ဖားကို စားသုံးပါ" မြန်မာဘာသာပြန် စာအုပ်အနှစ်ချုပ်ကို အခမဲ့ ဖတ်ရှု နားထောင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။